Sheekada filimka Telugu ah Goodachari: Inaba caadi ma ahan Adivi Sesh fariinta uu la yimid – Filimside.net
Sheekada filimka Telugu ah Goodachari: Inaba caadi ma ahan Adivi Sesh fariinta uu la yimid
August 18, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 18, 2018
Atooraha reer Telugu ee looga haray sameynta aflaanta sheekooyinka tayada wanaagsan Adivi Sesh wuu soo laabtay markaana wuxuu la yimid filimka hirgalay fariin ahaan Goodachari.
Adivi Sesh waa atoorihii sameeyay filimka Ksanam ee asigoo Hindi ah dib Tiger Shroff u sameeyay Baaghi 2 haatana waxaa durba bilaabatay dood ku aadan Adivi Sesh filimkiisa masraxa saaran in asigoo Hindi ah dib loo sameeyo.
Adivi Sesh isaga ayaa qoray sheekada filimka Goodachari waana xidig xirfado kala duwan leh aadna ugu wacan sameynta doorarka kala duwan.
Jilaayaasha filimkan: Adivi Sesh, Sobhita Dhulipala iyo Prakash Raj
Waqtiga uu soconaayo: 147-daqiiqo
Xiliga tiyaatarada la saaray: 3-Aug 2018
Fariinta Filimkan Hirgalay Oo Kooban: Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) waxaa soo bar baariya adeerkiis Satya, (Prakash Raj) kadib markii aabihiis Raghuveer lagu dilay hawlgal qarsoon oo uu sirdoonka Hindiya u fulinaayay.
Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) wuxuu ku riyoodaa inuu ciidanka sirdoonka Hindiya RAW qayb ka noqdo laakiin marwalbo wuu ku guul dareestaa hadafkiisa madaama uusan soo galin liiska ciidanka cusub ee la qaato.
Markii dambe Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) magaca aabihiis ayuu ku qoraa warqada imitixaanka looga qaadayo ama uu sirdoonka ku codsanaayo kadibna waa la qaadanaa madaama aabihiis uu ahaa sarkaal siweyn looga heybeesan jiray shaqada uu qaranka u qaban jiray.
Balse Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) halis weyn ayuu dhexda ka galaa markii qolo argagixiso ah isaga daba dhigtaan sidoo kalena ay dilayaan qaar ka mid ah saraakiisha sirdoonka kiiskana isaga ayaa loo qabsanaa.
Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) si uu wax badan kaga ogaado halista dalka ka jirto iyo in ciidanka isaga lagu diray dalka ayuu isaga baxaa asigoo magac kale oo Arjun Kumar ah sameesanayo si uu sir badan u ogaado.
Gopi alias Arjun (Adivi Sesh) oo Arjun la baxay ayaa ogaanayo burcada ugu weyn hogaamiyahooda ee aan heebtiisa la aqoonin inuu yahay Jagapati Babu sidoo kalena gabadha uu saaxiibka lahaa Sameera Rao (Shobitha Dhulipala) ayba ka tirsan tahay burcadka!
Haddaba Gopi/Arjun siduu usoo ceshanaa sharafkiisa, kaga taqalusaa burcada sidoo kalena aaminaada sirdoonka usoo ceshanaa ayaa filimkan qaybaha dambe loo daawan doonaa?
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Goodachari:
Action-kiisa oo heer sare ah qaab xarako iyo dabiici ahba loo sameeyay.
Goobaha lagu duubay oo muuqaal ahaan aad u qurux badan.
Fariintiisa oo waaqici ah si heer sarena ahna la isugu daba riday min bilaaw ilaa dhamaad.
Muusiga gadaal ka yeereyso (Background Score) oo aan inaba caadi ahayn iyo muusigadiisa guud oo wanaagsan.
Si qurux badan oo aad u cajiib badan ayaa filimkan loo faaf reebay waayo muuqaalo aan loo baahneyn ama kuwa habacsanaan ka muuqato maba ku jiraan.
Waxa ugu weyn filimkan kugu soo jiidanayo ayaa ah dhacdooyinka yaabka leh ee ku jiraan micnaha xog markii la ogaado sida ay furo badan u yeelanayo iyo qayaanada sirdoonka oo aan marnaba la fahmi karin.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Goodachari:
Waxyar ayuu qaybta dambe gaabis ka muuqdaa.
Waxaa fiicneyd in xili hore aan la ogaanin aqoonsi ahaan laadarka filimka taasi oo xiisaha mashruucaan cirka sii galin laheyd.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan Adivi Sesh doorkiisa sirdoonka dhibka badan la kulmaayo qaabka uu u matalay iyo xeeladiisa gaarka ah sidoo kalena dareenka qiirada badan wuu ka yara baxsaday qaabka loo matalo waana xidig weyn oo aan la buun buunin balse marwalbo filim saameyn xoogan leh la imaado fariin ahaan.
Prakash Raj doorkiisa dhex dhexaadka ah waa mid wanaagsan sidoo kalena garab siinayo marwalbo Adivi Sesh oo uu adeerkiisa ku jilaayo.
Jagapati Babu doorkiisa laadarka ah waa mid saameyn xoogan leh sidoo kalena labada atirisho Supriya iyo Sobhita (fanka ku cusub) doorarkooda si wacan ayay u jileen.
Gunaanad: Goodachari waa filim sirdoon oo si heer sare ah loo sameeyay sidoo kalena miisaaniyad xadidan xambaarsan oo ah 5 Crore miisaaniyad lagu iibiyay xuquuqda cajaladaha filimkan lagu qeybiyay taasi oo 100% ka caawin doonto si dhaqsi ah inuu HIT dhameestiran ku noqdo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Goodachari adigaaba ka heli doontid:
Waxaa Aqrisay 1,522